Yakaburitswa iyo iPhone 7 pamberi pekuratidzwa naApple pachayo | IPhone nhau
Sezvaunoziva, mazuva mashoma apfuura Apple yakavhura account yayo yeTwitter, account iyo isati ine ma tweets uye yanga ichimhanya zvichibva pama tweets akasimudzirwa. Nhasi, tichangotanga chiitiko umo vaifanirwa kuunza iyo iPhone 7, chimwe chinhu chaitika neiyo Twitter account. Chinhu chatisingatarisiri kuti chichaitika. Muparadzi mukuru munhoroondo, yakagadzirwa naApple pachayo.
Uye ndizvo izvozvo Kubva pane iyo account ivo vatanga kushambadza akateedzana ma tweets, atove akaremara, mune mavhidhiyo ekutanga ekukurudzira eiyo iPhone 7 akaonekwa., ichisimbisa akati wandei eguhwa ratange tichiona kusvika parinhasi vasati vapihwa zviri pamutemo. Boom.
Pakati peaya ma tweets, mamwe aine mavhidhiyo, isu takakwanisa kuona isina mvura, mbiri kamera iPhone 7 Pus mune idzva-nhema ruvara Uye, izvo isu tese taitarisira, pamwe nenzvimbo ichatanga neChishanu, Gunyana 9. Chii chakanyanya kubata pfungwa dzedu, zvakadaro, ndechekuti Apple inoita kunge iri kuvhura mamodheru maviri akasiyana madema, sezvatinoona mumufananidzo unotungamira ino chinyorwa. Imwe yadzo yaizove matte uye imwe yeakajeka ruvara.
Kubudikidza nezvakatorwa zvakasiyana zvemavhidhiyo aya ari kutenderera paTwitter, tinogona kuwana zano rakanaka rekuti iyi inotevera iPhone ichave yakaita sei. Iye zvino isu tinongofanirwa kumirira nguva yekuti tiione ichiturwa zviri pamutemo pachiitiko icho chiri kuitika panguva ino chaiyo muhotera yeBill Graham.
Hatina kujeka kana iko kukanganisa kwaive kubva kuApple chaiko kana kubva kuTwitter, nekuti ma tweets aya akasimudzirwa uye paigona kuve paine kukanganisa nepuratifomu pachayo. Tine chokwadi nechimwe chinhu, hatina kumboona chero chinhu chakadai.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Apple inosunga iyo paTwitter: yakafumura iyo nhema uye isina mvura iPhone 7
Miquel Garcia Prous akadaro
hahaha vanokanganisa sei ..!
Pindura Miquel Garcia Prous
Mumwe munhu adzingwa basa nhasi mu 3… 2… 1…
Super Mario achave aripo muApp Store